» वर्तमान राजनैतिक आवश्यकता र चुनावी तालमेलबीचको अन्तरसम्बन्ध
अहिलेको चुनावको सन्दर्भमा हामीले बागलुङ र प्युठानमा उनीहरूसित चुनावी तालमेल गरेका छौँ । तर यो उनीहरूसितको हाम्रँे अन्तरसङ्घर्ष वा अन्तरसम्बन्धको लामो सिलसिलाको एउटा तात्कालिक कडी मात्र हो । उदाहरणका लागि एमालेसितको हाम्रँे अन्तरसङ्घर्ष वा अन्तर्विरोधको सिलसिलालाई नै हेरौँ । एमाले सरकारमा भएका बेलामा वा नभएका बेलामा पनि त्यससित हाम्रँे त्यस प्रकारको अन्तरसङ्घर्ष वा अन्तरसम्बन्धको नीति रहने गरेको छ । एमालेले संविधान निर्माणको क्रममा खेलेको भूमिकालाई हामीले समर्थन गरेका थियौँ र प्रधानमन्त्रीको चुनावमा हामीले केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन पनि गरेका थियौँ । तर उनले प्रथम संविधान संशोधन विधेयकलाई संसदद्वारा पारित गराउन गरेको प्रयत्नको हामीले विरोध गरेका थियौँ । त्यो बेला कामरेड चित्र बहादुर केसी स्वयं सरकारको उपप्रधानमन्त्री हुनु हुन्थ्यो । कामरेड केसी सहित हाम्रा अन्य दुई सांसदहरू कामरेड दुर्गा पौडेल र कामरेड मीना पुनले समेत संविधान संशोधन विधेयकका विरुद्ध मतदान गर्नु भएको थियो ।
पृष्ठ १ बाट क्रमशः
त्यसरी उहाँहरूले नेपालको संसदीय इतिहासमा नै एउटा महत्वपूर्ण पाना जोडनु भएको थियो । स्वयं सरकारमा भएर सरकारी विधेयकको विरोध सामान्य कुरा थिएन ।
अहिले चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्रसित बागलुङ र प्युठानमा गरिएको चुनावी तालमेलबारे तीन वटा प्रश्नहरू व्यापक रूपले उठाएको पाइन्छ । प्रथम, नेपाली काङ्ग्रेससितको तालमेललाई किन अस्वीकार गरियो ? द्वितीय, बागलुङको संसदीय सिटलाई किन छाडियो ? तृतीयm दुर्गा पौडेललाई किन प्युठानमा उम्मेदवार बनाइयो ? जहाँसम्म नेकासितको चुनावी तालमेललाई किन अस्वीकार गरियो भन्ने प्रश्नको सम्बन्ध छ, त्यो प्रश्नको जबाफमाथि नै गई सकेको छ । अहिलेको देशको विशिष्ट अवस्थामा, खास गरेर नेका नेतृत्वको गठबन्धनद्वारा संविधान, गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निरपेक्षतामा समेत गम्भीर खतरा पैदा भएको अवस्थामा नेकासित चुनावी तालमेल गर्नु राष्ट्रघाती र गम्भीर प्रकारको अदूरदर्शितापूर्ण कार्य हुन्थ्यो । त्यसैले हामीले दृढतापूर्वक काङ्ग्रेससितको चुनावी तालमेललाई अस्वीकार गर्नु परेको हो ।
माथि जे भनियो, त्यसको अर्थ अहिलेको व्यवस्था, संविधान, सङ्घीयता वा अहिले हाम्रो तालमेल भएका राजनैतिक शक्तिहरूसित हाम्रँे मतभेद छैन वा उनीहरूसित विरोध वा सङ्घर्षको नीतिलाई हामीले त्याग गरेका छौँ भन्ने पनि होइन । तर त्यस प्रकारका मतभेद विरोध वा सङ्घर्षलाई कायम राख्दै अहिलेको चुनाव र त्यस सन्दर्भमा हामीले गरेको तालमेललाई इमान्दारिता वा दृढतापूर्वक अगाडि बढाउने हाम्रँे प्रयत्न हुनुपर्दछ ।